यी किशोरीको पकेट खर्च नेपालीको वर्षभरीको कमाइभन्दा धेरै, बर्थडेमा करोडौंको गिफ्ट !
HOME » यी किशोरीको पकेट खर्च नेपालीको वर्षभरीको कमाइभन्दा धेरै, बर्थडेमा करोडौंको गिफ्ट !
एजेन्सी। इङ्ल्याण्डकी सैफरोन ड्रेविट र उनका जुम्ल्याहा भाइ एस्पन ब्रिटेनमा जन्मिएका पहिलो यस्ता बच्चा हुन् जसका २ पिता छन् । उनीहरुका दुवै अरबपति पिताहरु समलिंगी हुन् र यी दुई जुम्ल्याहा सन्तान सेरोगेसीको मद्दतले जन्मिएका हुन् ।
हालै सैफरोनले आफ्नो १८ औं जन्मदिन मनाइन् । बर्थडेमा उनलाई जे गिफ्ट दिइयो त्यसले संसारलाई नै चकित पारिदियो । सैफरोनलाई बर्थडेमा यस्तो गिफ्ट दिइयो जुन आम मान्छेले सपनामा पनि सोच्न सक्दैनन् । यी किशोरीलाई सेतो रंगको ल्याण्डरोभर कार, करोडौं मूल्यका संसारका महंगा कपडा, जुत्ता, गहना बर्थडे गिफ्टको रुपमा दिइएको छ । अहिलेसम्म उनलाई बर्थडेमा दिइएको गिफ्टको मूल्य १६ करोड नेपाली रुपैयाँजति छ ।
सैफरोनलाई साथीहरुसँग घुम्न र पार्टी गर्नको लागि हरेक महिना जो पकेट मनी दिइन्छ त्यो नेपालीको वर्षभरीको कमाइभन्दा पनि धेरै हुन्छ । सैफरोनलाई हरेक महिना पकेट मनीको रुपमा ५ हजार पाउण्ड दिइन्छ जुन नेपाली ७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै हुन्छ । सैफरोन हातमा साढे ५ करोड नेपाली रुपैयाँ मूल्यबराबरको औंठी लगाउँछिन् ।
सैफरोनसँगै उनका जुम्ल्याहा भाइ एस्पनको पनि जन्मदिन पर्छ । एस्पनलाई पनि उनका दुई पिताले सैफरोनलाईजस्तै कालो रंगको ल्याण्डरोभर कार गिफ्ट दिए । यी दुई समलिंगी पिताहरु टोनी र बेरीसँग ५५० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । दुवैका कैयौं व्यवसाय र चर्चित मेडिकल रिसर्च कम्पनी छन् ।
काठमाडौंमा यसरी छापिन्छन् नक्कली नेपाली रुपैयाँ
वेष्टइन्डिजले भारतलाई दियो ३२३ को विशाल लक्ष्य